‘पाँच बर्ष भित्र समृद्ध नगरपालिका बनाउने योजना छ’ (अन्तर्वार्ता)
शनिवार, आश्विन १०, २०७७ १२:०७:०३
कृष्णपुर नगरपालिकाले अनआवश्यक रुपमा लिरहेको कर तत्काल रोक्नुपर्ने नगरबासीको माग
गोदावरीका ३ वडामा विपन्न परिवारलाई फेडोद्धारा राहत खाद्यान्न वितरण
सुदूरपश्चिममा आज थप ५८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
बाजुराको अर्गानिक स्याउ सबैको रोजाइमा
गृहमन्त्री थापाद्धारा कालापानी क्षेत्र नजीकै स्थापित सशस्त्र प्रहरीको गुल्मको उद्घाटन
कोरोनाबाट बितेको २४ घण्टामा थप ६ जनाको निधन
बितेको २४ घण्टामा थप १ हजार ३१३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टी
बझाङमा बालिकाको बलत्कार पछि विभत्स हत्या
डोटी प्रयोगशालामा आज भएको परिक्षणमा थप २६ जनामा कोरोना पुष्टी
बुधवार, भदौ ४, २०७६ गगन अयडी
बाजुरा जिल्लाको त्रिवेणी नगरपालीका नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र साउँदले आफूले अबको पाँच बर्ष भित्र त्रिवेणी नगरपालीकालाई समृद्ध नगरपालीका बनाउने योजना तयार पारिसकेको बताएका छन । साउँदले त्रिवेणी नगरपालीका जल जंगल जमीन लगाएतका प्रसस्त विकास निमार्णका संभावना बोकेको नगरपालीका रहेको हुदाँ आफूलाई जनप्रतीनिधीहरुले काम गर्ने अवसर दिए त्रिवेणी नगरपालीकालाई समृद्ध नगर बनाए छोड्ने योजना रहेको बताए । यसै बिषयमा त्रिवेणी नगरपालिकाका नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र साउँद सँग गोदावरी न्युजकर्मी गगन अयडीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
त्रिवेणी नगरपालिका कस्ता कस्ता योजना रहेका छन ?
नगरपालीका भित्र रहेका हरेक धार्मीक तथा पर्यटकीय गन्तब्यको विकास निमार्ण गर्नुका साथै मौरे नाटेश्वारी हुदै बडीमालीका मन्दिर सम्म केवुलकारको सञ्चालन गर्ने योजनाहरुलाई पहिलो प्रथामीकता दिने गरी त्रिवेणी नगरपालीकाले निर्णय गरेको छ । त्यस्तै अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालवालीकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम , नगरपालीकाले नियमीत बजार अनुगमन निर्देशीका तयार गर्ने , जेष्ट नागरीक परिचयपत्र वितरण , अल्पकालीन नगर सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने , एफ .एम रेडीयो व्यवस्थापन सञ्चालन कार्यविधि बनाउने लगायतका योजना रहेका छन ।
तपाईको सेवा प्रवाहबाट आम नागरिक कतिको सन्तुष्ट छन् ?
देशको नयाँ संरचना अनुसार सुरुमा नजप्रतिनिधिले सिफारिस गर्ने देखि हरेक कुरामा अन्यौलता थियो । जनप्रतिनिधिहरुले धेरै कुरा मलाई सोध्नुहुन्थ्यो र कर्मचारीहरु पनि त्यती जानकार हुनु हुदैनथ्यो । नयाँ नयाँ काम भएका कारण कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने अन्यौल थियो । हामीसँग विषयगत शाखा कृषि, महिला, बालबालिका, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका बिषय नयाँ कुरा थिए । हामीले नबुझेको होइन तर त्यो विषयमा हामीसंग विशेषज्ञता थिएन । त्यसबारेमा अहिले थाहा भएको छ । यस्तो अवस्थाबाट सुरुवात गरेकोले जनतामा पनि अन्यौलता थियो । हामीले जनतालाई बुझाउने, जनप्रीतनिधिलाईँ प्रशिक्षण दिने, कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने जस्ता काम चुनौतिपूर्ण हुन् । यि सबै काम कार्यपालिकाको सदस्य सचिव र नगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएको हैसियतले कर्मचारीको मात्रै होइन कि सबै कुराको समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको विचमा समन्ध कस्तो छ ?
जनप्रतिनीधी र कर्मचारी विचको सम्बन्ध निकै समधुर रहेको छ कुनै काम गर्दा जनप्रतीनिधीहरुले आफुलाई सोधने गरेका हुन्छन । भने कर्मचारीहरुले पनि जनप्रतीनिधीको सहकार्यमा काम गर्दै आएका छन । यस नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय बासीले मलाई चिनेको भएर पनि सहज भएको हुन सक्छ । असल मनोभावनाले काम गर्याे, मैले नगरे कसले गर्ने भन्ने जस्तो आफ्नो दायित्व बोध गरेर अगाडि बडेको कारण जनप्रतिनिधिले सहयोग गर्नुभएको छ । त्यसकारण मलाई समन्वयन गर्न सजिलो भएको छ । धेरै गर्न नसके पनि हामीले एकप्रकारको आधार तयार गरि सकेका छौं ।
एउटा प्रशासकीय अधिकृत कस्तो हुनुपर्छ ?
जिम्मेवार पदमा बसेरका सच्चा राष्ट्र सेवकले जनतालाई आफूभन्दा माथी राखेर काम गर्नुपर्छ । त्यसमा लगनसिल, अनुशासित, निस्वार्थी र व्यवहारिक र राम्रो ज्ञन क्षमता हुनुका साथै जनतालाई मुस्कान सहतिको सेवा दिने प्रमुख प्रशासकीय हुन पर्छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नै हो सिहंदरबारको अधिकार गाउँसम्म पुर्याएको ?
नीति निर्माण गर्ने काम जनप्रतिनिधिको हो । काम गर्ने भनेको कर्मचारीले हो । जनप्रतिनिधिले एउटा भवनाले काम गर्नुहुन्छ र त्यो कानुन संबत छ कि छैन कर्मचारीले बुझी दिने हो । प्रत्येक कुरामा हामी सहभागी भएर कानुन बमोजिम काम गर्नु पर्ने कुरामा कानुन विपरित हुन खोजेको छ भने त्यस्तो हुन नदिने र यसरी जाँउ भन्ने गर्नुपर्छ । कानुन कार्यन्वयन गर्ने हामीले नै हो, हामीले नगरे हुदैन । जनप्रतिनिधिलाई बाटो देखाउने काम हाम्रो हो ।
दुर्गम क्षेत्र हुनुको समस्या के के छन ?
गाउँमा यातायात नहुनु यातायता नहुँदा एक वडाबाट अर्को वडामा काम गर्न समस्या हुनु सञ्चार सेवाबाट टाडा रहनु । कार्यालयका कनै पनि डाटाहरु समयमा इन्र्टी गर्न नपाउनु जस्ता समस्या रहेका हुन्छन । भने दुर्गम भएका कारण कर्मचारीहरु आउन नमाने भएकाले पनि कार्यालयमा दक्ष कर्मचारीहरुको अभाव हुने गरेका छ ।
प्रकाशित मिति: बुधवार, भदौ ४, २०७६, ११:०८:००
कृष्णपुर नगरपालिकाले अनआवश्यक रुपमा लिरहेको कर तत्काल रोक्नुपर्ने नगरबासीको माग शुक्रवार, आश्विन ९, २०७७ 29
कृष्णपुर नगरपालिकाले अनआवश्यक रुपमा लिरहेको कर तत्काल रोक्नुपर्ने नगरबासीको माग शुक्रवार, आश्विन ९, २०७७
गोदावरीका ३ वडामा विपन्न परिवारलाई फेडोद्धारा राहत खाद्यान्न वितरण शुक्रवार, आश्विन ९, २०७७
बाजुराको अर्गानिक स्याउ सबैको रोजाइमा शुक्रवार, आश्विन ९, २०७७